NDỤMỌDỤ: IHE GỊ NA-EZI NDỊ ỌMA - Element Society
IHE NDỊ MMADỤ: IHE GỊ NA-EZI NDỊ ỌMA
N'ịbụ nke ndị mgbasaozi Britain kwadoro, oge eruola ịhapụ akụkọ ifo banyere 'ụmụaka ndị na-eme ihe nkiri' iji chọpụta ihe dị ha mkpa n'ezie na ihe ha na-eme dị ka ihe si na ya pụta. Jikọọ na otu ndị gụsịrị akwụkwọ nke afọ 12 nke usoro mmemme ntorobịa nke UK, National Citizen Service (NCS) na mkparịta ụka. Nụrụ echiche ha banyere isiokwu ndị dị na njirimara, obodo, nrọ na ọchịchọ, media, influencers, nnwere onwe na nnupụisi.
A na-akpọ Cheyenne onye ọrụ afọ ofufo iji kwado NCST na Nzukọ Ndị Ntorobịa Ndị Ahịa na Thursday, March 22, 2018. Cheyenne dị ka otu n'ime ihe ọmụmụ gbasara NCS Youth Report na-arụ ọrụ na Disemba Disemba. Cheyenne ga-anọdụ n'elu panel na ndị ọzọ NCS Grads na Graduate Manager James Canvin na ihe omume na-esote izu na London.